यसकारण हुन्छ बाथ रोग, कसरी जोगिने ? « Mero LifeStyle
यसकारण हुन्छ बाथ रोग, कसरी जोगिने ?
डा.श्वेता नकर्मी, बाथ रोग विशेषज्ञ
बाथ रोग विभिन्न रोगहरुको संकलन बझिन्छ । अहिलेसम्म १ सयभन्दा बढी प्रकारका बाथ रोगहरु पत्ता लागिसकेका छन् । मानव शरीरमा बाहिरी जिवाणुसँग लड्नका लागि विशेष कोशिकाहरु हुन्छन् । कुनै कारणवस यी कोशिकाहरुले आफ्नै शरीरका विभिन्न अंगलाई आक्रमण गर्न थाल्छ । त्यसलाई अटोयिमुन प्रोसेस भनिन्छ । यस अटोयिमुन रोगहरुमा बाथ रोग, मधुमेह, थाईरोइड तथा अन्य रोगहरु पर्दछन् ।
बाथ रोगका कारण
बाथ रोग लाग्नुको कारण अहिलेसम्म पत्ता लागि सकेको छैन । तर, वंशाणुगत र कुनै विशेष जिवाणुको संक्रमणले बाथ देखिन सक्छ ।
विश्वमा १ सय भन्दा बढी प्रकारका बाथ पत्ता लागिसकेका छन् । नेपालको सन्र्दभमा गठिया बाथ, कुरकुरे हड्डी खिइने बाथ, हड्डी मक्किने बाथ, यूरिक एसिड को बाथ, मेरुडण्डको बाथ, लुपस, मांसपेसीको बाथ विशेष हुन् ।
बाथको मूख्य लक्षण भनेकै जोर्नीहरु दुख्नु हो साना तथा ठूला जोर्नीहरु दुख्ने, सुनिन्ने र अरठ्ठो हुने प्रारम्भिक लक्षणमा पर्छ । समयमै उपचार नगर्दा जोर्नीहरु बिस्तारै बाङ्गिँदै जान सक्छ ।
यो बाथ प्राय जसो ४० वर्ष कटेका महिलामा बढी देखिन्छ । पुरुषमा भन्दा महिलामा यो तीन गुणा बढी देखिएको छ । जोर्नीहरु दुख्ने, सुनिन्ने र अरठ्ठो हुने र बिस्तारै बाङ्गिदै जाने यसका लक्षण हुन् ।
कुरकुरे हड्डी खिइने बाथ
यो बाथ प्राय जसो ५० वर्ष कटेका महिला र पुरुषमा देखिन्छ । यसमा धेरै जसो घुँडाको जोर्नी भ¥याङ तलमाथी गर्दा अथवा उकालो ओरालो हिड्दा दुख्ने गर्छ । यसले हातका साना जोर्नीमा पनि असर गर्छ ।
युरिक एसिड बाथ
यो प्रायः जसो ४० वर्ष कटेका पुरुषमा देखिने बाथ हो । युरिक एसिड को बाथ महिला र बच्चामा धेरै देखिँदैन । यस बाथमा प्राय जसो खुट्टाको बुढी औंला रातो भएर सुन्निएर बेस्सरी दुख्छ र ४, ५ दिनमै आफैँ निको हुन्छ । यस्तो दुखाई वर्षमा २, ३ पटक पनि हुन सक्छ ।
यो बाथ तन्नेरी महिलाहरुमा बढी पाइन्छ । यसमा जोर्नीहरु दुख्नुको साथै कपाल धेरै झर्ने ,मुखमा बारम्बार घाउ आउने, घाममा जाँदा धेरै पोल्ने र डाबर आउने तथा चिसोमा औलाको रँग परिवर्तन हुने जस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् ।
यो पनि महिलामा बढी देखिने एक प्रकारको बाथ हो । यसमा शरीरका विभिन्न मांशपेसीहरु दुख्ने, कटकटी खाने, आलश्य लाग्ने, निद्रामा समस्या हुने बारम्बार टाँउको दुख्ने जस्ता लक्ष्यण हुन सक्छन् ।
बाथबाट बच्ने उपाय
बाथ हुन नदिने त कुनै उपाय छैन । तर बाथका आउने जटिलताबाट भने बच्न सकिन्छ । समयमा रोगको पहिचान र उपचार गरियो भने बाथ पुरापुरी नियन्त्रणमा आउन सक्छ । यसको नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रकारका औषधिहरु र पद्धतीहरु उपलब्ध छन् । रोगको धारण र जटिलता अनुसार औषधिको प्रयोग गरिन्छ । बाथ दीर्घकालिन रोग भएकाले औषधि पनि प्रायः लामो समयसम्म नै चल्छ । तर, लक्षण सुरु भएको ३ महिनामा बाथको उपचार सुरु गर्न सकेमा बाथ रोग पुरा नियन्त्रणमा रहेर औषधी खान नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
#बाथ रोग विशेषज्ञ